JW Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Febụwarị 2016
Ajụjụ: Gịnị ka i chere ga-eme okpukpe ụgha n’ọdịnihu?
Amaokwu Baịbụl: Mkpu. 18:8
Otú a ga-esi enye ya: Isiokwu a ga-akọwakwuru gị gbasara ihe a Baịbụl kwuru. [Gosi ya isiokwu dị na peeji nke 3-6.]
Ajụjụ: Gịnị ka i chere ga-enyere ezinụlọ aka ịna-ebi n’udo?
Amaokwu Baịbụl: Kọl. 3:13
Otú a ga-esi enye ya: Isiokwu a ga-akọwakwuru gị ihe ndị ọzọ ga-enyere ezinụlọ aka ịna-ebi n’udo. [Gosi ya isiokwu dị na peeji nke 12-13.]
GEE CHINEKE NTỊ
Ajụjụ: Ọ̀ ga-amasị gị ibi n’ụwa mara mma ka nke a e sere ebe a? [Gosi ya peeji nke 2-3, gị echere ka ọ zaa.]
Amaokwu Baịbụl: Jere. 29:11
Otú a ga-esi enye ya: Akwụkwọ a kwuru otú anyị ga-esi gee Chineke ntị ka anyị nwee ike inweta ihe ọma ndị o kwuru na ya ga-emere anyị n’ọdịnihu. [Tụleenụ peeji nke 4-5.]
Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Febụwarị 2016
mailto:?body=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Febụwarị 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016053%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Febụwarị 2016